Daryeel Caafimaad oo ay helayaan dadka ugu nugul Hargeysa - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Daryeel Caafimaad oo ay helayaan dadka ugu nugul Hargeysa
20.03.2010 | Gobolka Maroodi Jeex, Somaliland
Maanta, Sucaad ayaa mar kale timid rugta caafimaadka MSF ee Shadaha. Markii ugu hore keligeed ayaa timid, si ay u ogaato in adeegyada caafimaadka ee MSF ay dhab ahaan yihiin lacag la’aan. Markan waxa ay keentey wiilkeeda saddex-jirka ah oo magaciisu yahay Yuusuf Cabdillaahi, kaas oo ay hayso nafaqo-xumo ba’an.
Sucaad waxa ay magaalada Hargeysa kula nooshahay 6 carruur ah oo ay dhashey waxaana ay lacag yar ka heshaa dadka ay dharka u dhaqdo. ”Waxa aan ku noolaan jirey Itoobiya, tuulo yar oo aan sidaa uga fegeyn Jigjiga,” ayaa ay tiri, “laakiin markii ay xoolihii ay abaarta naga baabi’isey oo uu ninkeyguna uusan wax lacag ah haleynin, ayaa aan go’aansanney in aan ku soo noqonno Hargeysa oo ah halkii aan ku dhashey.”
Waxa ay sheegtey in nolosha halkaan ay adag tahay, laakiin ay ka wanaagsan tahay noloshii ay ku noolaayeen Itoobiya 5 sano ka hor. Inta ay sugeyso in ay kalkeeda aragto kaalkaaliyaha MSF, waxa ay si deggan u ruxaysaa ilmaheeda xannuunsan oo ay xabadkeeda ku hayso. Ilmuhu dhaqdhaqaaqa uu sameeyo ayaa aad u yar indhahana waa uu isku hayaa.
“Tirada dadka imanaya xarunteenna caafimaad waa ay sii kordheysaa,” ayuu yiri Faysal, oo ah kaalkaaliye caafimaad ahna madaxa xarunta caafimaadka. “Waxa aan bilowdey bishii Disembar waxaana aan bishii ugu horreysey aragtey 100 bukaan oo keliya. Hadda waxaa jira maalmo aan aragno in ka badan 120 bukaan.”"Aad ayaan mashquul u nahay. Waqtigaan waxa aan diiradda saareynaa carruurta yaryar, sababta oo ah waa kuwa ugu nugul.”
Waxa uu sheegey in uu jecel yahay in uu la shaqeeyo MSF sababta oo ah waxa ay daryeel caafimaad siiyaan dadka ugu baahida badan. Sanadkii 1999 ayaa uu muddo gaaban la shaqeeyey MSF. “waan ku faraxsanahay in ay MSF soo noqotey, sababta oo ah dadka ayaa ay daryeelaan ayna caawiyaan.”
Ka dib markii uu Feysal dhammeeyey baaritaankii uu ku sameynayey Yusuf, ayaa Sucaad waxaa la siiyey daawooyin iyo cunto gaar ah oo daawo ah oo soconeysa hal toddobaad. Waa in ay toddobaadka soo socda soo celisaa ilmaheeda si loo baaro, iyo si ay ugu qaaddo cunto toddobaad kale soconeysa. ”Waa aan hubaa in wiilka yar uu markaa intan aad uga wanaagsanaan doono,” ayaa uu ku noolla caddeeyey Faysal oo daweynaya bukaankii ku xigey.
Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa dhowaan ku noqotey Somaliland. Dhakhaatiirta iyo kaalkaaliyeyaasha MSF waxa ay markii ugu horreysey dad ku daweeyeen Hargeysa sanadkii 1985, waxaana ay goobo kale oo ka tirsan Soomaaliland ay ka sii shaqeynayeen ilaa laga soo gaarey 1999kii. Hadda ayaa MSF ay magaalada ka furtey laba rugood oo caafimaad oo yaryar oo daryeel caafimaad siiya dadka ku nool degsiimooyinka Lug iyo Lacaag iyo Shadaha. Degsiimooyinkan waxaa ku nool dad badan oo barokacayaal, kuwo barokac ka soo noqdey iyo qaxooti isugu jira kuwaas oo aan haysan lacag ay isaga bixiyaan daryeel caafimaad. MSF waxa ay sidoo kale waddaa barnaamij toddobaadle ah oo lagu quudiyo carruurta nafaqo-xumadu ay hayso.
Mashrruca MSF ee Hargeysa
Ururku waxa uu rajeynayaa in uu waxqabadyadiisa ku ballaariyo qaybaha kale ee magaalada Hargeysa waxaana uu higsanayaa in daryeel caafimaad uu gaarsiiyo Dadka Gudaha ku Barokacay iyo kuwa aan kharashka iska bixin karin. MSF waxa ay sidoo kale maamullada kala hadleysaa sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha caafimaad ee degaannada kale ee Somaliland, gaar ahaan sidii wax loogu qaban lahaa hooyooyinka iyo dhallaanka.
Tags: abaar, barokac, Hargeysa
Qoraalada kale ee ku saabsan Gobolka Maroodi Jeex, Somaliland
Xerada Shadaha ee Hargeysa, ayaa noloshu ka socotaa iyada oo ay jiraan xaalado adag